कैलालीमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु, ३ जना घाइतेको अबस्था कस्तो छ ? – My Blog
कैलालीमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु, ३ जना घाइतेको अबस्था कस्तो छ ?
No Comments on कैलालीमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु, ३ जना घाइतेको अबस्था कस्तो छ ?
धनगढी । कैलालीमा मोटरसाइकल दु’र्घट’नामा प’रेर एक जनाको मृत्यु भएको छ । जोशीपुर गाउँपालिका-५ मा बा०२०१५प २७३८ नम्बरको मोटसाइकल दुर्घटना हुुँदा एक जनाको मृत्युु भएको सुुदूरपश्चिमप्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय अत्तरियाले जनाएको छ ।
ट्राफिक प्रहरीका अनुसार दु’र्घटनामा परेर लम्की चुहा नगरपालिका-७ बस्ने २५ वर्षीय नरेश रोकायाको मृत्युु भएको हो । गम्भीर घाइते भएका उनको उपचारका लागि धनगढी ल्याउने क्रममा मृत्युु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
सोही मोटरसाइकलमा सवार अन्य तीन जना समान्य घाइते भएका छन् । लम्की चुुहा नगरपालिका-७ का मोटरसाइकल चालक २५ वर्षकै अभिषेक चौधरी, २० वर्षका जीवन चौधरी र २४ वर्षीय प्रकाश चौधरी घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ । सामान्य उपचारपछि तीनै जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । तीव्र गतिका कारण मोटरसाइकल दुर्घटनामा परेको प्रहरीको भनाइ छ ।
यो पनि, अझै बनेन रोल्पा अस्पताल भवन
जिल्ला अस्पताल भवन समयमै निर्माण सम्पन्न नहुँदा सेवाग्राही समस्यामा परेका छन् । आर्थिक वर्ष ०७६÷०७७ को असार मसान्तसम्म निर्माण गरिसक्नुपर्ने सो भवन सम्झौता सकिएको १५ महिना पूरा भइसकेको छ । निर्माण व्यवसायीको चरम लापर्बाहीले भवन समयमा नबनेको सरोकारवालाको आरोप छ । अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष फविन्द्र आचार्यले सम्झौता अवधि सकिएको लामो समय वितिसक्दासमेत समेत भवन कहिले सम्पन्न हुन्छ भन्ने अन्यौल रहेकोे बताउनुभयो ।
← सल्यान बस दुर्घटना : १२ जनाकाे मृत्युहुनेको पहिचान खुल्याे (नामावली सहित) → सौतेनी हजुरवुवाले ११ वर्षकी बालिकालाई गर्भवती बनाए, पूरै देशमा बबाल